Ireo Amerikana Mainty Ve No Taitra Kokoa Amin’ny Resaka Fiaviana Raha Mitaha Amin’ireo Mainty Avy Any Karaiba? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jolay 2014 3:42 GMT
Saina Jamaikana sy Amerikana Nakopaka Tamin'ny Fetiben'ny Amerikana manam-piaviana Antillais, tamin'ny 2008 tao Brooklyn, New York. Sary an'i David Berkowitz, mpampiasa Flickr, CC BY 2.0
Leo ny resa-piaviana ve ny olona avy ao Karaiba ? Aidan Neal, bilaogera Amerikana manam-piaviana Jamaikana, no miteny fa izany tokoa, farafaharatsiny raha ampitahaina amin'ireo Amerikana mpifanila amin-dry zareo.
Anatinà lahatsoratra iray somary mihantsy nomena lohateny hoe “Fanavakavahana volon-koditra ao Amerika: Tsy ilain'ny Avy Ao Karaiba Tsotra izao Izany“, notsindriany fa noho ny zava-niainan'izy ireo ara-tantara, ireo tena avy amin'ny razambe Afrikana-Amerikana no “mazàna manana fahatsapàna tsy hita hohamarinina momba io resaka fiaviana io” ary vokatr'izay dia miaina amin'ny fomba hafa ny fanavakavahana raha mitaha amin'ny ataon'ireo mpifindra monina avy ao Karaiba mankany Etazonia :
Afaka mandeha aminà trano fisakafoana aho ary tsy hahamarika velively hoe ny latabatra misy ahy no hany misy olona mainty ao anatin'io toerana io. Mety hankafy ny sakafoko aho, ho tafiditra anatinà fifanakalozan-dresaka mafonja, ary hamela fankasitrahana kely ho an'ny mpandroso sakafo, amin'ny tsy fahatsapàna velively hoe ‘tsy nahazo fitrohana akory izahay niaraka tamin'ny ranonay,’ na hoe ‘tsy nila nanafatra ny mofon'izy ireo akory ilay latabatra iray hafa.’ Tsy hoe mikatsaka izay tsy fetezana ara-poko araka izay maha-izy azy izay aho, tsy mahita aho na kely aza….
Nolazainy fa ny olona ao Karaiba, raha ampitahaina, dia mora iaraha-miaina kokoa raha olana ara-piaviana izany no resahana :
Ny sasany amintsika izay nobeazina tany Antilles dia tsy nitombo tany aminà tokantrano izay nahitàna ny fifanakalozan-dresaka mikasika ny fiaviana ho toy ny lohahevitra mahazatra. Tsy mbola nandre velively aho olona iray niantso iray hafa tamin'ny hoe teny hoe N (fiandohan'ny hoe Noir/Negro), ary tsy mbola nanavaka velively ny namako tamin'ny fiavian'izy ireo. Fotoana ela lasa izao, raha nandray ny fangatahan'ny namana iray avy aminà mpiara-mianatra fahiny aho, somary zendana aho fa hay rasipa ka Kaokaziana. Rehefa namerina ny tsiahin'ny fotoana niarahanay aho dia tsy nahatsiaro velively ny fiaviany. Nihevitra azy mandrakariva ho nanana lokon-koditra mazavazava kokoa noho ny ahy aho, saingy tsy nihevitra azy velively ho fotsy. Rehefa niha-lehibe, tsy nifametraka velively ny andaniny sy ny ankilany ho anaty sokajim-piaviana samihafa izahay.
Nofintinin'i Neal hoe fomba fiasa/fanatonana mendrika kokoa ny fanehoana toetra miabo sy tsy filàna vaniny :
Na amin'inona na amin'inona, tsy izaho no hanoso-kevitra hoe aza raharahaina ny hetsika fanavakavahana fiaviana na olona. Fa sosokevitra omeko ny hoe raha toa ka eo amin'ny toeran'ny fanavakavahana amin'izay rehetra atao, amin'ny faniratsiràna na fandikàna vilana, dia angamba ny fomba fijerinao mety ho mazavazava kokoa raha toa aleonao mamela azy hahita anao. Azontsika atao ny manova ny ho fizotry ny hoavintsika raha ialantsika ny fifohana ny rivotry ny fifanavankavahana. Tsy ekena, ary tsy ho azo ekena velively izany. Kanefa, afaka mitoetra mandrakariva ho tonga saina amin'ny zava-misy iainana isika ary mitolona mba hitondra mankany amin'ny fampitsaharana ireo ideolojia mikorosy fàhana, amin'ny tsy fanohizana izany haharitra ela eo amin'ny fiainantsika manokana.
Akon'ny vahaolana avy amin'ilay Amerikana mpilalao sarimihetsika, Morgan Freeman, hiadiana amin'ny fanavakavahana io fomba fijeriny io : tao anaty tafatafa iray tamin'ny 2005 niarahany tamin'ny “60 Minutes”, fandarahan'i Mike Wallace, toro-hevitra avy aminy ny “Atsaharo ny miresaka momba an'io.” Kanefa, ny lahatsoratry ny bilaogin'i Neal no fandraisana anjara farany indrindra tamin'ireo fifanakalozan-dresaka misy aminìizao fotoana izao mikasika ny fomba fanehoankevitra samihafan'ireo Afrikana-Amerikana sy ireo mitovy aminy avy atsy Karaiba momba ny fanavakavahana. Na i Malcolm Gladwell mpanoratra aza, izay Jamaikana ny reniny, dia nitrandraka io olana io tao anaty andrana iray nataony ho an'ny “The New Yorker” tamin'ny 1996.
Raha samy niaina fanandevozana ireo vondron'olona roa ireo, dia lazaina fa ireo mainty ao Karaiba, noho ny isany fotsiny (mbola manome ny, na ny maro an'isa, na ny vitsy an'isa tsy azo hamaivanina manerana ny faritra Karaiba manontolo ny Mainty), sy afaka nitàna anjara toerana mavitrika kokoa tao anatin'ny vondrom-piarahamonina nisy azy ary voaaro tamin'ny fanavakavahana henjana izay mitohy manjo ireo Afrikana-Amerikana.
Mety ho hisy ve ny hoe satria ny ankamaroan'ireo olona mainty avy ao Karaiba efa zatra nitàna andraikitra teny amin'ny vondrom-piarahamoniny – izay lavina be ho an'ireo mainty ao Amerika – dia somary tsy taitra loatra amin'ny resaka fanavakavahana ry zareo amin'izao fotoana izao, na tsy dia manome vàhana loatra azy io amin'ny fiainany? Ao amin'ny Facebook, nihevitra ny toy izany i Marva Linsday Reid :
Hitanay mitovy daholo izahay tsirairay ao an-tanàna ary hitanay fa mahavita azy, matanjaka ary marani-tsaina izahay. Nanome anay fahatokisan-tena matanjaka be izany….
Mahaliana ny valin-kafatra sasany ho an'ilay lahatsoratr'i Neal. Corey Gks niteny fa raha toa ny fahasamihafana hita ka afaka hazavaina amin'ny tantara, dia manamaivana ny hery vaikan'ny ao Karaiba ity famintinana ity :
amin'ny ankapobeny dia “eny” ….saingy tsy haiko hoe ahoana no ahafahan'ny olona hiandrandra hafa ankoatra izay. Mibaribary kokoa sy mivantambantana ny fanavakavahana ao Etazonia izay ny ampahany no manazava ny antony mahatonga [ny Afrikana-Amerikana] ho mahay mifandrindra amin'izy io. Ao Karaiba no somary sarotsarotra raisina kokoa io; any amin'ny ankamaroan'ireo nosy dia vitsy an'isa kokoa ny fotsy.
Noho io tsy fifandanjan'ny isa io dia nisy fahatokisana kokoa teo amin'ireo tanora ao Karaiba, indrindra rehefa mandeha mipetraka any Etazonia izy ireny. Tsy kisendrasendra, ary hitako mampiseho mariky ny tsy fahafantarana tsara an'io zava-nisy ara-tantara io ilay mpanoratra, hoe ny ankamaroan'ny hery vaikan'ny hetsiky ny “US Civil Rights, Black Power” sy ireo hetsika hafa manohitra ny fanararaotana dia naka ny aingam-panahiny avy amin'ireo olona tao Karaiba na Afrikana-Amerikana niara-niaina teny anivon-dry zareo.
Gks nilaza fa tsy dia manao tsinontsinona loatra ny resaka fanavakavahana toy ny anipazan'i Neal azy sy nanononany ireo mpikatroka mafàna fo ary mpitarika ny hetsika “Pan-Africanism” akory ireo taranak'olona avy ao Karaiba :
Avy aiza no heverin'ireo Afrikana-Amerikana fa tany niavian-dry Edward Wilmot Blyden, Marcus Garvey, Kwame Ture/Stokely Carmichael, Claudia Jones na CLR James ? Iza no heverin-dry zareo fa hanampy hampahery vaika an-dry Malcolm X? Tsy dia hoe olona tsy manan-tsiny toy inona araka izay mety ho fiheveran'ny sasany azy akory ny vahoaka avy any Karaiba raha resaka fanavakavahana.
Na izany aza, nokianin'i Marlon James, mpanoratra tantara, ny lahatsoratr'i Neal, tamin'ny fihazonany ny hoe tsy mbola afaka loatra amin'ny resaka fanavakavahana araka ny voalazan-dramatoa io ny Jamaikana. “tsy mbola afaka amin'ny fanandevozana ny firenena iray izay mandoko ny hodiny ho fotsy kokoa. Tsy mbola afaka aminìny fanandevozana ny firenena iray izay indro ralehilahy fa lasa maka vady somary fotsy kokoa mba hahatonga ny fianakaviana ho fotsy. Tsy mbola afaka amin'ny fanandevozana ny firenena iray izay mbola iresahan'ny olona ao aminy momba ny atao hoe “volo tsara”. Tsy mbola afaka amin'ny fanandevozana ny firenena iray izay ny ankamaroan'ny indostriany no naorina nandritry ny fotoana fivarotana andevo ary mbola mahazo misitraka an'izany hatrizao ireo olona anjatony nahazo tombony tamin'ireny, efa ho anjato taonany (kopa-tànana ho an'i Tate Gallery),” hoy ny nosoratan'i James.
Raha mbola mitohy ny adihevitra, dia nanampy izy ireny hanehoana ireo fomba samihafa ifanmpidimpidiran'ny resaka foko sy kolontsaina – ary angamba hanaporofoana fa ny fanavakavahana, hitanisàna an'ilay Jamaikana Bob Marley, dia hitohy hametraka karazana “fanandevozana ara-tsaina” mandritry ny 150 taona eo ho eo eny anivon'ireo olona mainty, taorian'ny nanafoanana ny varotra olona tany Etazonia.